Liiska cusub ee Guddiyadii Doorashada ee Heer Federaal iyo Dowlad Goboleedyada oo lagu dhawaaqayo - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Liiska cusub ee Guddiyadii Doorashada ee Heer Federaal iyo Dowlad Goboleedyada oo lagu dhawaaqayo
Ra’iisal wasaaraha xukuumadda xlilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa lagu wadaa inuu goor dhow shaaciyo Liisyada Guddiya Doorashada ee Heer Federaal, Dowlad Goboleed iyo Xalinta khilaafaadka.
Guddiyadan oo muddo badan dib u dhacay ayaa la sheegay in 95% la gabagabeeyay, iyadoo khilaafka ugu weyn ka taagnaa Guddiga Doorashada Somaliland, waxayna wararkii ugu danbeyay sheegayaan inuu galabta lagu shaacin lahaa, balse ay dib ugu dhacday Caawa.
Xalinta khilaafka ka taagnaa Guddiyada Doorashada ayaa ahaa qodobkii ugu horeeyay ee heshiiskii labaad ee Doorsahada, loona asteeyay inay lagu dhammeystiro muddo toddobaad ka yar, laakiin waxay qaadatay 23 maalmood.
Waxaa weli jira cabasho ka taagan qaabka loo kala saaray Guddiyada, waxaana Musharax C/raxmaan C/shakuur uu shaaciyey inay weli ku jiraan ilaa 20 ka mida taageerayaasha Madaxweynaha xilkiisu dhammaaday ee Maxamed C/llaahi Farmaajo.
Previous articleTurkiga oo ku guuleystay tijaabada Gantaal cusub oo Maraakiibta lagu burburiyo (Daawo)
Next articleRW Rooble oo magacaabay Guddiyada Cusub ee Doorashada Dadban (Akhriso Magacyada oo dhan)